2 Samuel 11 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Samuel nke Abụọ 11:1-27
Devid na Bat-shiba kwara iko (1-13)
Devid kpara nkata ka e gbuo Yuraya (14-25)
Devid kpọọrọ Bat-shiba lụwa (26, 27)
11 Ná mmalite afọ, n’oge ndị eze na-eji aga agha, Devid ziri Joab na ndị na-ejere ya ozi nakwa ndị agha niile e nwere n’Izrel ka ha gaa gbuo ndị Amọn. Ha nọchibidokwara Raba.+ Ma Devid nọ na Jeruselem.+ 2 Ná mgbede otu ụbọchị, Devid biliri n’àkwà* ya, na-ejegharị n’elu ụlọ n’obí ya. Ọ nọkwa n’elu ụlọ ahụ hụ otu nwaanyị na-asa ahụ́. Nwaanyị ahụ makwara ezigbo mma. 3 Devid wee zie mmadụ ka ọ gaa jụta onye nwaanyị ahụ bụ. Onye ahụ asị ya: “Nwaanyị ahụ bụ Bat-shiba+ nwa Elayam,+ nwunye Yuraya+ onye Het.”+ 4 Mgbe e mechara, Devid ziri ndị mmadụ ka ha gaa kpọta ya.+ Nwaanyị ahụ bịakwutekwara ya, ya na ya edinaa.+ (Ihe a mere oge nwaanyị a na-eme onwe ya ka ọ dị ọcha.*)+ Nwaanyị a mechakwara laghachi n’ụlọ ya. 5 O mechara dị ime, ziekwa Devid na ya dị ime. 6 Devid wee zie Joab, sị: “Zitere m Yuraya onye Het.” Joab wee zie Yuraya ka ọ gaa hụ Devid. 7 Mgbe Yuraya bịakwutere Devid, ọ jụrụ ya otú Joab na ndị agha Izrel mere nakwa otú agha si aga. 8 Ọ gwaziri Yuraya, sị: “Gaa zuo ike n’ụlọ gị.”* Mgbe Yuraya si n’ụlọ eze pụọ, e ji onyinye* eze sị ka e nye ya sochie ya azụ. 9 Ma, Yuraya alaghị n’ụlọ ya. Kama o so ndị ọzọ niile na-ejere onyenwe ya ozi hie n’ebe e si abanye n’ụlọ eze. 10 A gwaziri Devid, sị: “Yuraya alaghị n’ụlọ ya.” Devid asị Yuraya: “Ọ̀ kwa i si esi bata? Gịnị mere na ị laghị n’ụlọ gị?” 11 Yuraya asị Devid: “Igbe Chineke,+ ndị Juda, na ndị Izrel ndị ọzọ nọ n’ụlọ ndò, onyenwe m Joab na ndị na-ejere ya ozi makwara ụlọikwuu ha n’ọhịa. Oleezi otú m ga-esi gaa n’ụlọ m ka m rie ihe, ṅụọkwa mmanya nakwa ka mụ na nwunye m dinaa?+ Ana m aṅụrụ gị iyi na m gaghị eme ihe a!” 12 Devid gwaziri Yuraya, sị: “Nọkwuo ebe a taa, echi m ga-ahapụ gị ka ị gawa.” Yuraya wee nọrọ na Jeruselem n’ụbọchị ahụ, nọrọkwa chi abọọ. 13 Devid kpọkwara ya ka ọ bịa soro ya rie ihe, ṅụọkwa mmanya. Mgbe ọ bịara, o mere ka ọ ṅụfee mmanya ókè. Ma mgbe chi jiri, ọ laghị n’ụlọ ya, kama, ọ gara soro ndị na-ejere onyenwe ya ozi hie, dinara ebe ọ na-adị edina. 14 Mgbe chi bọrọ, Devid deere Joab akwụkwọ ozi ma nye ya Yuraya ka o nye ya. 15 Ihe o dere n’akwụkwọ ozi ahụ bụ: “Ziga Yuraya n’ihu agha, ebe agha kpụ ọkụ n’ọnụ, hapụkwanụ ya ebe ahụ laa azụ ka e nwee ike gbuo ya.”+ 16 Mgbe Joab na ndị agha ya gbara obodo ahụ gburugburu ka ha lụso ya agha, o zigara Yuraya ebe ọ ma na ndị bụ́ dike n’agha nọ. 17 Mgbe ụmụ nwoke obodo ahụ pụtara ka ha lụso Joab agha, ha gburu ụfọdụ ndị na-ejere Devid ozi. Yuraya onye Het sokwa ná ndị ha gburu.+ 18 Joab zikwara mmadụ ka ọ gaa kọọrọ Devid ihe niile gbasara agha ahụ. 19 Ọ gwara onye ahụ, sị: “Ị kọchaara eze ihe niile gbasara agha a, 20 o nwere ike iwe iwe. O nwekwara ike ịjụ gị, sị, ‘Gịnị mere unu ji ruo obodo ahụ ezigbo nso mgbe unu na-alụso ya agha? Ùnu amaghị na ha ga-anọ n’elu mgbidi na-agba unu ụta? 21 Ònye gburu Abimelek+ nwa Jerubeshet?+ Ọ́ bụghị otu nwaanyị nke nọ n’elu mgbidi na Tibez ji nkume e ji egwe nri tụgbuo ya? Gịnị mere unu ji ruo mgbidi ahụ ezigbo nso?’ Gwazie ya sị, ‘Yuraya onye Het na-ejere gị ozi so ná ndị nwụrụ.’” 22 Onye ahụ Joab ziri ozi gara zie Devid ihe niile Joab ziri ya. 23 Ọ gwara Devid, sị: “Ndị ahụ bịara kara anyị ike. Ha bịara lụso anyị agha n’ọhịa. Ma anyị chụghachiri ha azụ, chụrụ ha ruo n’ọnụ ụzọ ámá obodo ahụ. 24 Ndị na-agba ụta wee nọrọ n’elu mgbidi na-agba ndị na-ejere gị ozi ụta. Ụfọdụ n’ime ndị na-ejere eze ozi nwụkwara. Yuraya onye Het na-ejere gị ozi sokwa ná ndị nwụrụ.”+ 25 Devid asị ya: “Gwa Joab ka ọ ghara isogbu onwe ya maka ihe a merenụ, n’ihi na o nweghị onye na-enweghị ike ịnwụ n’agha. Gwakwa ya ka ọ lụsie agha ike ma merie obodo ahụ.+ Gbaakwa ya ume.” 26 Mgbe nwunye Yuraya nụrụ na Yuraya di ya anwụọla, ọ malitere iruru ya uju. 27 Ozugbo oge iruru ya uju gachara, Devid ziri ozi ka a kpọta nwunye Yuraya, a kpọta ya n’ụlọ ya, ya aghọọ nwunye ya,+ mechaakwa mụọrọ ya nwa nwoke. Ma ihe a Devid mere were Jehova ezigbo iwe.*+
^ O nwere ike ịbụ mgbe oge ọ nọ ná nsọ ka gachara.
^ Na Hibru, “Gaa saa ụkwụ n’ụlọ gị.”
^ Ya bụ, onyinye mmadụ na-enye onye bụ́ nnukwute ọbịa ya.
^ Na Hibru, “dị njọ n’anya Jehova.”